🥇 ▷ Telefoonnada Qalabka Biyo-La'aanta ah ee Sub-ku-habboon-biyo-biyoodka ee ugu fiican (2019) ✅
Telefoonnada Qalabka Biyo-La’aanta ah ee Sub-ku-habboon-biyo-biyoodka ee ugu fiican (2019)
Kusoo dhawow, Waxaan rajeynayaa in qoraalkan uu ka heli doono macluumaadka ku saabsan ka-hortagga telefannada gacanta ee biyaha ka-celiya ama telefishanka gacanta ee aan iibsan karno ama heli karno badhka labaad ee sannadka.
The Mobilada ama taleefannada gacanta biyo ma galeen Wax dhibaato ah kuma lahan maydhashada roobka ama barkadda dhexdeeda ama xitaa marka ay biyuhu ku jiraan wax ka badan 1 mitir.
Laakiin aad ugu taxaddar in qaar ka mid ah yihiin caddayn firidhsan halka kuwa kalena biyuhu aan biyuhu daboolnayn.
Buuggan taleefannada gacanta ee biyuhu biyuhu kaameerayaan waxaan ku tusi doonnaa dhammaan telefoonada gacanta casriga ah ee loo aqoonsaday inay taageeraan biyaha.
Telefoonnada gacanta ee ugu fiican ee lagu ridi karaa biyaha ayaa laga heli doonaa boostadan.
Waa maxay taleefanka casriga ee biyaha ka celiya ama taleefannada gacanta ee sannadka 2019?
Telefoon gacmeedka biyaha ka celiya waa aalad asal ahaan laga ilaaliyo biyaha.
Inta badan Taleefannada casriga ah way jebiyaan haddii ay qoyan yihiin laakiin taleefannada gacanta ee liistadaani xitaa kuma dhacaan roob da ‘.
Taasi waa sababta oo ah, tusaale ahaan, waxay leeyihiin dabool gaar ah oo biyuhu ka samaysan yihiin, ama guri aan la furi karin ama polymer daboolaya godadka si aysan biyaha u oggolaan.
Waa maxay faa iidooyinka taleefanka gacanta ee biyuhu ka hortagaan ama taleefannada gacanta hoosaadka ah ee 2019-ka?
Faa’iidooyinka taleefanka biyuhu aanu biyuhu ka fogeyn waa badan yihiin, waana sababtaas tan aan ka soo qaadaneyno moobiilka moobiilka waxaan kaa tageynaa liiska kuwa ugu fiican.
Marka ugu horeysa waxa ay dareento sida a Taleefanka gacmeedku biyuhu biyuhu waa inaanay badqabin. Ahaanshaha tani waa mid ka mid ah astaamaha ugu weyn ee horeyba dhowr sano loogu dhex qaatay aalado badan.
Telefoonnada gacanta ee biyaha ayaa waliba loo isticmaali karaa in qof loogu yeedho inta lagu dhex jiro musqusha ama barkadda dhexdeeda, xitaa haddii taleefanka gacantu qoyan yahay.
Guud ahaan, aaladaha noocan ah ee biyaha u adkaysta badanaa a Kala sooc batoonka kamaradaha maadaama shaashadaha taabashada aysan shaqeynin biyaha hoostiisa. Badhankan waxaad ku qabsan kartaa sawirro iyo fiidiyowyo saaxiibbadaada iyo qoyskaaga barkad maalin ah.
Waxaa jira dhowr nooc oo taleefannada gacanta ee biyaha celiya, ama taleefannada gacanta ee biyaha lagu kari karo.
Aalladaha qaarkood ayaa si badbaado leh loogu isticmaali karaa barkadda si sawirro loogu qaado biyaha hoostooda, kuwa kalena waxay ku badbaadaan kaliya biyo yar sida biyo daadinta fudud.
Mid ka mid ah faa iidooyinka ugu weyn ee taleefanka gacmeed biyuhu biyuhu waa inaanad ku qubeysan kartaa;)
Waxa kale oo jira taleefanno casri ah oo biyuhu biyuhu aan la isticmaali karin, taas oo ah, biyaha hoostooda ayaa la gelin karaa. Taasi waa sababta hadda ee boostada waxaan kuugu sheegi doonaa taas waa qawaaniinta iyo kaladuwanaanshaha haddii taleefanka gacantu yahay mid la kari karo ama biyo u adkaysan kara.
Biyaha iska caabbinta ee casriga ah waxaa laga heli karaa Qiimaynta IP ee aaladda, oo “IP” u taagan tahay ilaalinta biyaha.
Tirada sare, sida ugu wanaagsan ayaa looga ilaaliyaa biyaha.
Telefoon casri ah oo leh Shahaado siinta IPX7 tusaale ahaan waa la kariikaraa ilaa qoto dheer hal mitir nus saac, halka hal IPX3 ay leedahay biyo iska caabin yar.
Macluumaad kufilan iyo hadda haddii ugu dambeyntii aan ka tago taleefannada casriga ah ee ugu wanaagsan ee 2019 ee leh biyo iska caabbinta ama taleefannada gacanta ee gacanta lagu qaban karo.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso: Sida loo sameeyo taleefanka gacantu biyuhu biyuhu biyuhu marayaan
Telefoonnada gacmeed ee submersible ugu fiican ee 2019
Liiska waxaan kaga tagi doonaa waxa ugu dambeeya suuqa, Way iska cadahay in boostadan loo cusboonaysiiyay bil bil, maanta oo ah Ogosto 2019 waxaan leenahay telefoonno casri ah oo dhawaanahan soo socda, qaar kuwan aad ku arki doontid liiska waa taleefannada gacanta ee Shiinaha, laakiin waxay ka mid yihiin taleefoonnada gacanta ee biyaha ka adag ama ka hortagga ah.
Taxanaha Galaxy S10
S10 Range oo dhan waxaa ka mid ah waxqabadka wanaagsan ee biyaha adkeysiga
Dhammaan noocyada taleefannada gacanta cusub Samsung Galaxy S10 Plus, S10 iyo S10e waxaa lagu qiimeeyaa IP68 ilaalinta biyo iyo boodh. Dhammaantoodna waxay sidoo kale muujinayaan dallaca bilaa-waayirka ah, waxay leeyihiin jaakadda moolka taleefanka gacanta waxayna leeyihiin shaashad wareegsan oo muuqaal casri ah leh. Haddii aad rabto inaad ogaato inta kale ee astaamaha guud ee xaddiga ‘S10’ oo dhan, booqo qoraalkan.
Huawei 30 PRO waa mid ka mid ah taleefannada gacanta ee ugu horumarsan adduunka isla markaana biyaha u adkeysta.
Taleefanka gacanta ee P30 Pro ayaa hadda ah telefoonka ugu fiican gudaha khadka huawei , Tani waa koox si cadaalad ah awood u leh oo la yimid shaashad weyn oo gaareysa 6.47 inji leh naqshadeynta geesaha qalooca , Kirin 980 chipset-ka ugu dambeeyay iyo illaa 8GB oo Ramuul ah. Leh Shahaadada IP68, oo macnaheedu yahay inay ku noolaan karto illaa 1.5 mitir (~ shan cagood) oo biyo ah illaa 30 daqiiqo
iPhone XS iyo XS Max
IPhones cusub waxay keenaan ilaalin IP68
Apple Badbaadinta iPhone XS iyo XS Max ee qoyaanka ayaa waxyar laga qabtay, marka la barbar dhigo sanadkii hore ee iPhone X.
Isbedelka ku yimid Kahortagga IP68 ee IP67 waa mid ka mid ah isbeddelada muuqda ee Apple ku yimid iPhonekan cusub.
Pixel 3 iyo Pixel 3XL
Pixel 3 iyo Pixel 3XL taleefannadu aad ayey u fiican yihiin, kuwan waxaa ku jira astaamo aad u wanaagsan oo ugu fiican oo ay iska caabin karaan.
Taleefannada calanka ee Google waxay leeyihiin naqshado cusub, laakiin wali waa ay iska caabiyaan biyahooda, oo hadda loo cusbooneysiiyay tilmaanta IP68 ee ugu cimri dheer.
Pixel 3 Taleefannada Gacantu waxay leeyihiin 5.5 inji, halka 6.3-inji Pixel 3 XL uu bilaabmayo. Waxaa ka mid ah astaamaha kale.
Sony Xperia 1, waa SONY heer sare ah taas oo ah muujinta ugu weyn ee aan haysanno taas oo ah biyo aan adkeyn karin.
Calankii ugu dambeeyay ee Sony ayaa leh wax badan oo ay soo bandhigaan. Waxay leedahay kala saarid IP65 / IP68, way leedahay saddex kamaradood gadaal ah wuxuuna leeyahay shaashad weyn oo ah 6.5 inch 4K. Shaashadu waxay leedahay saami dhan oo 21: 9 ah, taasoo ka dhigaysa mid aad u sarreysa. Halkan waxaad ka akhriyi kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taleefankan gacanta.
The Telefoonkii ugu dambeeyay ee taxanaha Galaxy Note Waxay noqon kartaa taleefanka gacantu ugu fiican ee ay soo saartay Samsung.
Waxay leedahay qalab aad u heer sareeya. Xitaa haddii aad heshid moodhalka ugu dhaqaalaha badan, waxaad wali helaysaa taleefanka 6.4-inji, aaladda processor-ka ah ee loo yaqaan ‘Qualcomm Snapdragon 845 processor’, 6GB oo RAM ah, 128GB oo kaydinta gudaha ah, booska microSD ee xitaa kaydinta badan iyo batariga weyn ee 4,000 mAh oo ay tahay inuu socdo ugu yaraan hal maalin, ama laga yaabee, in ka badan, oo si buuxda loo soo oogo .. Waxa ugu fiican, waxay leedahay qiimeyn sare oo IP68 ah oo loogu talagalay biyo iyo iska caabbinta boodhka.
Tani waa taleefanka Huawei ee ugu wanaagsan ee ilaa iyo hadda loo yaqaan, waana taleefanka Shiinaha ee Shiinaha ugu fiican ee waligiis abuuray. Huawei P20 Pro wuxuu leeyahay shaashad 6.1-inji ah iyo guddi OLED ah. Quruxbadan aaladda waxay leedahay qiimeynta shahaadada IP67, sidaas darteed waa mid ka mid ah telefoonnada gacanta ee biyuhu ka adag tahay.
Samsung Galaxy S9 iyo S9 +
Labadan xayawaan waxay u yimaadeen inay indhaha oo dhan ku sawiraan laakiin sidoo kale waxay leeyihiin astaamo kale oo cajiib ah.
Labadan calan ee cusub ee dadka Samsung ayaa sidoo kale biyuhu biyuhu yihiin maaddaama ay keenaan IP68.
In kastoo aanan kugula talineynin inaad qoyso ama biyaha ku tuur. Liistada ayaa waliba galaya Galaxy S8 Firfircoon, in kasta oo kan looga heli karo suuqyada qaar.
In kasta oo bahalkani u muuqday mid aad u dhowaan waa inaan kuu sheegaa in Shahaadada biyuhu biyuhu waa inay kujiraan kaliya astaamaha loo yaqaan “IP67”, sidaa darteed taageerayaasheeda badan ee sumadda ayaa ah niyad jab marka loo eego tartanka sida Samsung, iyada oo aan loo eegin inay weli tahay mid xanaaq badan isla markaana aad u yar, laakiin waxay ku jirtaa meel sare oo ka mid ah taleefannada gacanta ee adduunka ugu fiican oo diida biyaha. iyo kala daadasho.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato iPhone X waxaan kugu casuumayaa inaad aqriso qoraalkan. Waxaa weheliya iPhone X, iPhone 8 iyo iPhone 8 Plus, oo hadaan rabno waxaan sidoo kale ku dari karnaa liisaska smarpthones adkaysi u leh.
Calanka ubaxyada HTC U12 Plus waa xayawaannada kale marka lagu daro soo qaadashada waxyaabo badan oo sidoo kale nalooga tagayaa naqshadeynta heerka ugu hooseysa ee Liquid Surface, kaas oo na siinaya muraayad qurux badan oo leh IP68 iska caabbinta biyaha.
HTC U12 Plus ayaa bixisa Processor-ka ugu dambeeyay ee ‘processor’, the Snapdragon 845 . Taleefanka ayaa bixiya 6 GB oo RAM ah ama 64 ama 128 GB oo kaydinta gudaha ah, oo leh ballaarinta microSD. Waxa kale oo jira 6-inch Super LCD 6 oo weyn oo leh xallin 2,880 x 1,140. Batteriga HTC U12 Plus waa yara yaraaday maadaama ay kaliya tahay 3,500 mAh.
Samsung Galaxy S8 Firfircoon
Samsung Galaxy S8 Active waa nooca ugu adag ee laga heli karo Samsung.
Telefoonkan, oo leh qaab dhismeed iyo guri bir ah, wuxuu la kulmayaa faahfaahino millatari oo MIL-STD-810G ah, taasoo macnaheedu yahay in shirkadda loo yaqaan ‘S8 Active’ ay tahay mid u adkaysata burburka, boodhka iyo biyaha. Telefoonku wuu shaqeyn karaa xitaa markay tahay ku daboolan illaa 1.5 mitir oo biyo ah illaa 30 daqiiqo.
Qoraalka galaxy 8 waa shaki la’aan inuu yahay mid ka mid ah taleefannada gacanta ee ugu fiican adduunka oo dhan, tani waa biyo adkeysi leh oo waxaad dhihi kartaa waxay u adkeysan kartaa wax walba waa IP68 oo waliba adeegsada Gorilla Glass 5 sagxadaha oo dhan. Gal shaki la’aan dusha sare taleefannada gacanta ee biyaha adkeysta. Si aad u aragto inta ka hartay astaamaha moobiilkan cajiibka ah waxaan kugu casuumayaa inaad gasho qoraalkan.
Apple iPhone 7 iyo 7 Plus
Waxay leedahay halbeeg warshad of Amniga IP67 (taas micnaheedu waa inaad ku quusin karto ilaa hal mitir oo biyo ah).
Laakiin kaliya taas kaliya ma keento kuwa kuhadlaya istiraatiijiyadaha, macruufka 10 isla markaana tirtiraa soo-jeedinta dhaqameed ee sameecadaha dhagaha iyadoo door bideysa fikradda hillaaca.
Tani waa taleefanka gacmeed ee ugu dambeeyay ee sumadda Sony waana kit, tani waxay keenaysaa 23 megapixel camera, processor-ka Snapdragon 820 iyo 5.2-inji Full HD shaashad ah. Soo qaado Qiimeynta IP68, waad la raaci kartaa barkadda oo aad ku dhex geli kartaa ilaa 1.5 mitir illaa 30 daqiiqo.
Tani sida aan ognahay ma ahan taleefoon gacmeed caan ah, laakiin waa AMG X1 Waa mid ka mid ah taleefannada gacanta ee ugu adkaysta, kaliya ma ahan biyo, laakiin sidoo kale waxay ka hortagtaa boodhka iyo shuruudo kale oo kala duwan.
Sidii aan kuu sheegay, waa taleefanka gacanta oo wanaagsan maxaa yeelay waxay sidoo kale leedahay kumbuyuutar Snapdragon 617, 4 GB oo RAM ah iyo kaydad 64 GB ah.
Motorola Moto G5 iyo G5 Plus
The Motorola Moto G5 sida aan ognahay waa taleefanno gacmeed heer sare ah. Sannadkan taleefannadan waxay la imanayaan shaashad 5.5-inji ah oo taas ka sokow taasi waa inay u adkeysan karaan kala-baxa. Tani waxay ku dhacdaa qaybta ugu fiican ee smarpthones badiyaa qiimahoodu hooseeyo. Halkan waxaan kaga tagaa faa’iidooyinka mobiladan.
Samsung Galaxy S7 Firfircoon
Sidii laga filay liistada waxaan haysanaa taleefano gacmeed kale oo ka socda shirkada South Korea, hadii Galaxy S7 Active uu yahay taleefoon gacmeed kale oo biyaha u adkeysan kara sidoo kalena u adkeysan kara dhowr waxyaabood kale sida uu ku yimid Shahaadada IP68, iyada oo aan laga tagin waxay u keentaa muuqaal aad u xoog badan, kaas oo siinaya qiimo dheeraad ah marka la barbar dhigo walaalkiis mataanaha ah.
Meelna laguma helin shaki ku jiro dhamaan taleefannadan gacanta laga isticmaali karo waa ikhtiyaar aad u fiican.